Ny adiresy IP 192.168.8.1 dia ampiasaina amin'ny fifanoratana ao anaty tamba-jotra manokana misy rafitra samihafa. Ampiasaina koa izy io rehefa manomboka ny fomba fidirana hanoritana ireo fitaovan'ny tambajotra. Raha te-hiditra amin'ny 192.168.8.1 dia apetraho ny Ip ao amin'ny baraon'ny adiresy tranokalaninao, na kitiho ny rohy eto ambany.
Raha tambajotra manokana izy io, midika izany fa mety ho fananana mialoha miaraka amin'ny filaharana anaty tambajotra samihafa. Ny PC izay tsy manana fifandraisana amin'ny tamba-jotra dia tokony hifanaraka amin'ny protokolina TCP na IP Internet tsirairay avy.
Logins ho an'ny 192.168.8.1
Ahoana ny fomba hidirana amin'ny 192.168.8.1?
Zava-dehibe ny adiresy IP rehefa te hiditra amin'ny router ianao. Ny dingana voalohany dia ny fidirana amin'ny Internet sasany & ampidiro ny https://192.168.8.1 rohy ao anaty boaty URL an'ny mpitety tranonkala izao, tsindrio ny 'Midira key.
Misokatra ny varavarankely vaovao izay mandrisika anao hiditra ID. Hampiasa ny diplaoma fidirana an-tsokosoko ianao avy eo mba hidirana amin'ny interface router.
Rehefa miroborobo ny fomba fidirana dia hoentina any amin'ny pejy fandraisam-bahinin'ny router ianao. Ao amin'ny tontonana admin, azonao atao ny manova toe-javatra maromaro hifanaraka amin'ny tambajotra misy anao sy ny fiarovana mialoha.
Ny fanovana ny adiresy IP ny router anao dia tsy soso-kevitra foana raha ataon'ny matihanina avara-pianarana.
Adino IP adiresy mpampiasa ary adiresy tenimiafina?
Fanamarinana ny Boky Torolàlana
Raha manadino ny anarana mpampiasa sy teny miafina 192.168.8.1 ianao dia afaka mikaroka ny Manual / Box ho an'ny Router. Azonao atao ny mikaroka ny lisitry ny router misy ny solonanarana anarana sy ny teny miafina.
Mamerina ny Router
Raha nanova ny solonanarana / tenimiafina misy anao ianao ary nanadino azy, ny fomba tokana hamerenana amin'ny laoniny ny fidirana dia ny famerenana ny router mankany amin'ny fikirakira default, izay hamerina ny fanovana rehetra ao amin'ny toerana misy anao. Mba hamerenanao ny router:
Makà zavatra maranitra, toy ny fanjaitra na taratasy kely, ary tadiavo ny bokotra famerenana eo an-damosin'ny mpandeha anao.
Hahita bokotra miafina kely ianao. Tsindrio ary tazomy ilay bokotra miaraka amin'ilay zavatra maranitra mandritra ny 10-15 segondra.
Hiverina amin'ny laoniny ireo fanovana rehetra natao tamin'ny voalohany, anisan'izany ny solonanarana / tenimiafinao novainao. Azonao atao ny miditra amin'ny fampiasana ny mari-pahaizana fidirana default.
Ara-dalàna amin'ny dingana sasany ny mahita olana isan-karazany amin'ny router. Raha tsy afaka mihetsika mihoatra ny efijery fidirana ianao dia mila mahatadidy zavatra vitsivitsy. Hamarino fa mijanona ho marin-toerana ny Internet ary tsy miovaova. Safidy iray hafa ny fampiasana ny baiko maika hanapahana ny vavahady misy anao. Ny adiresy IP diso izay azonao ampiasaina hidirana amin'ny interface interface. Azonao atao koa ny mifandray amin'ny mpanome tolotra internet raha mila fanampiana fanampiny ianao.
'192.168.8.1'dia adiresy IP mitokana. Ity no adiresy IP fanta-daza ohatra '192.168.0.1' & '198.168.0.1' satria mitovy ny fiasany sy ny an'ny 2 ambiny ary ny hany fanavahana dia ny "192.168.8.1 'tsy ampiasain'ny ambony indrindra amin'ireo orinasan'ny router. Ireo orinasa toa an'i MediaLink, Huawei dia mampiasa ity adiresy Protocol net ity.
Tokony ho tsapanao fa ny router rehetra dia misy karazana adiresy IP 2 isan-karazany. Adiresy IP iray nalaina tao amin'ny tambajotra eo an-toerana antsoina hoe adiresy LAN IP & ny ambiny dia atolotry ny modem antsoina hoe adiresy WAN IP. Ny adiresy IP '192.168.8.1' dia matetika ampiasaina mba hidirana amin'ny fiasan'ny router. Ity adiresy IP manokana ity dia ampiasaina amin'ny fampifanarahana ny fitaovan'ny tambajotra.
Amin'ny voalohany ny fomba hahitana ny adiresy IP an'ny router.
Voalohany, ampifandraiso amin'ny PC ny router na ny fitaovana hafa. Mila mahafantatra ianao fa raha manokatra ny tontonana admin admin dia mila mampifandray amin'ny router amin'ny fomba mety ianao. Ary tsy mila karazana fifandraisana Internet ianao amin'izany.
Noho izany, mila ampiasaina amin'ny adiresy IP an'ny router ianao. Azonao atao ny mamantatra ny adiresy IP an'ny router amin'ny alàlan'ny fitsidihana ny command prompt amin'ny Laptop.
Fomba hafa hitsidihana ny adiresy IP 192.168.8.1
Azonao atao koa ny manova ny adiresy IP an'ny router amin'ny fotoana rehetra amin'ny fomba 2, amin'ny alàlan'ny fanokafana CD fananganana manokana amin'ny alàlan'ny fampiasana web-interface. Ilaina ho an'ny ankamaroantsika izany satria maro ny mpanjifa te-hiantoka fa tsy misy adiresy 192.168.8.l mifandona amin'ireo adiresy fitaovana hafa. Raha misy manadino ny adiresy IP farany nataony, dia azony atao ny mamerina ny router ary avy eo dia hiverina amin'ny laoniny ny zava-drehetra. Ho fanampin'izay, misy olona afaka mamantatra ny adiresy IP zarany amin'ny alàlan'ny fikatsahana ny “IP-ko” fotsiny eo amin'ny habaka fikarohana Google. Mazava ho azy fa hiverina amin'ny adiresy IP anao izy io.
Amin'izao fotoana izao dia mandehana any amin'ny navigateur default anao na amin'ny navigateur hafa avy eo miditra ao amin'ny IP bara adiresy https://192.168.8.1 ao amin'ny habaka adiresin'ny browser. Ity dia hitarika anao amin'ny tranokala manokana & hampiditra anao hiditra amin'ny tontonana admin admin.
Eto ianao dia mila manoratra anarana solonanarana sy tenimiafin'ny router mba hidiranao ny tontonana admin admin izay ahafahanao manova safidy maro toy ny Proxy, safidy azo antoka, fitantanana tambajotra, fikirakirana WLAN, lozisialy router & maro hafa.
Raha tsy tadidinao ny Username & Password Router dia inona no tokony hatao?
Olona maromaro no mety tsy hahatadidy ny anarany sy ny teny miafiny. Noho izany dia misy fanazavana ho an'ireo izay tsy nahatsiaro ny azy solonanarana sy tenimiafin'ny router.
Mety misy tranga iray izay tsy tadidinao ny anarana mpampiasa sy ny passkeys. Amin'ny tranga toa izany dia mila mihaza azy amin'ny marika ny router ianao miaraka amin'ny laharan'ny andiany sy ny adiresy fidirana.
Tranga iray hafa mety tsy ho tadidinao ny passkey anao. Noho izany, mila averinao ny fikirana amin'ny router miaraka amin'ny lakilen'ny famerenana miafina ao amin'ny router.
Tranga iray hafa dia mety tsy mbola nanova ny mari-pahaizana momba ny fidirana amin'ny router ho hitanao ny anao fidirana default amin'ny router Ireo karapanondro amin'ny Internet.
Raha mahatsapa ny antsipirian'ny fidiran'ny router ianao dia azonao atao ny manoratra ao amin'ny pejin-tranonkalanao ao amin'ny pejin-tranonkala ary azonao alaina ao amin'ny tontonana admin admin.
Azonao atao aza ny mamerina ny router miaraka amin'ny pejin-tranonkala fanamboarana miorina amin'ny tranokala.
Amin'ny farany, efa nanondro teboka maromaro momba ny 192.168.8.1 Adiresy Internet Protocol. Betsaka ny fampahalalana momba ny router, modem tsy misy tariby, adiresy IP, & maro hafa izay natolotra tamin'ity sanganasa ity. Ity adiresy IP ity dia hanampy anao amin'ny fampifanarahana ny tambajotram-pifandraisana an-trano nefa tsy miatrika olana maro. Manantena aho fa mahasoa anao rehetra ity hiditra amin'ny tamba-jotra ny router ary azo antoka fa nampitombo ny mombamomba anao amin'ny adiresy IP izany.